Blockchain समाचार 06.09.2018 - Blockchain समाचार
सेप्टेम्बर 6, 2018 व्यवस्थापक
सीoinbase BlackRock मदत संग Bitcoin ETF पडताल
कोइनबेस एक विनिमय-कारोबार उत्पादन गुप्त बाँधिएको सिर्जना गर्न खोजिरहेको छ, यसबारे परिचित मान्छे अनुसार, एक तरिका रूपमा खुद्रा लगानीकर्ताले पनि अस्थिर बजार पहुँच बढाउनका अनुमति. हाल सप्ताह मा दृढ विनिमय-कारोबार उत्पादनहरु सुरु संग दृढ गरेको विशेषज्ञता मा ट्याप BlackRock गरेको blockchain काम समूहका सदस्यहरू कुराकानी आयोजित छ.
कोइनबेस एक सूचकांक कोष घोषणा गरेको थियो,6महिनौ अघि, को आधिकारिक लगानीकर्ताले उद्देश्य cryptocurrencies. एक ETF, तथापि, थप मुख्यधारा लगानीकर्ताले तिर तैयार छ. कोइनबेस एक गुप्त ETF विकास गर्न भने, यो अन्य कम्पनीहरु को एक नम्बर पनि आफ्नै सुरु देख सामेल थियो, प्रतिद्वन्द्वी मिथुन सहित, बिटवाइज सम्पत्ति व्यवस्थापन, र VanEck.
चिनियाँ शहर खुट्टाोल मा convicts को आन्दोलनहरु ट्रयाक गर्न blockchain प्रयोग
Zhongshan को दक्षिणी चिनियाँ शहर मा खुट्टाोल मा Convicts अब फेला आफूलाई एक blockchain नेटवर्कमा ट्र्याक भइरहेको सक्नुहुन्छ. Zhongshan को न्याय विभाग यसलाई तथाकथित गुणस्तर सुधार गर्न पूर्व-कैदी को आन्दोलनहरु निगरानी गर्न blockchain आधारित प्रणाली शुरू भएको छ भन्छन् “समुदाय सुधार।”
Parolees मा जाँच र दैनिक कर्तव्य जसबाट प्रत्येक दोषी गरेको आन्दोलनहरु मा-को मिति डाटा प्रदान पूरा गर्न आवश्यक छ, त्यसैले सामुदायिक सुधार कर्मचारी र सान्दर्भिक कानुन प्रवर्तन निकायहरूबाट नेटवर्क पहुँच दिनुभएको भएका कुनै पनि समयमा दोषी गरेको whereabouts थाहा गर्न सक्षम छन्, एक आवश्यक दिनचर्याबाट तोडने छ भने र यसरी आवश्यक उपाय लाग्न सक्छ. को न्याय विभाग प्रविधिलाई परंपरागत तिनीहरूले व्यवस्था पालन गर्दै सुनिश्चित र सामुदायिक सेवा कार्य गर्दा शारीरिक parolees पालना गर्न आवश्यक छ कि जनशक्ति बोझ कम गर्न सक्षम छ भन्ने दावी.
उच्च टाइम्स यसको आईपीओ लागि Bitcoin स्वीकार
को भांग प्रकाशन उच्च टाइम्स यसको निरन्तर प्रारम्भिक सार्वजनिक बलिको लागि cryptocurrency स्वीकार छ (आईपीओ). उच्च टाइम्स प्रतिनिधि जन Cappetta कम्पनी भुक्तानी विकल्पको रूपमा Bitcoin स्वीकार छ पुष्टि. Cappetta भने एक नियामक दाखिला (अन्यथा संकेत) बनेकाे थियाे “को सेकेन्ड खुसी बनाउन।”
यो कोष अमेरिका तत्काल अमेरिकी डलर मा गुप्त रूपान्तरण गर्न प्रयोग भइरहेको छ टिप्पण लायक छ. उच्च टाइम्स’ आईपीओ नै राम्रो रहेको छ, भने टोपी, र कम्पनी एक परिणाम रूपमा प्रत्यक्ष सूचीकरण देख छ. “यो नियमावली एक [कोष सङ्कलन] यो महिनाको 12 मा बन्द गर्न जाँदै छ, र त्यसपछि त्यहाँबाट हामी सूची प्रक्रिया सुरु हुनेछ” उसले भन्यो.
लागि क्राकेन दैनिक बजार रिपोर्ट 05.09.2018
$172एम आज सबै बजार मार्फत कारोबार
एशिया |. Regulators have Subpoena ...
अघिल्लो पोस्ट:Blockchain समाचार 05.09.2018
अर्को पोस्ट:Blockchain समाचार 07.09.2018